Hoggaamiyeyaasha Afrika oo ka falceliyay dilkii Madaxweynihii dalka Chat - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Hoggaamiyeyaasha Afrika oo ka falceliyay dilkii Madaxweynihii dalka Chat
Hoggaamiyeyaasha Afrika oo ka falceliyay dilkii Madaxweynihii dalka Chat
Hoggaamiyeyaasha Afrika waxay muujiyeen naxdin iyo filan waa ku aadan geeridii ku timid madaxweynihii Chad Idriss Déby oo la toogtay markii uu wajahayay fallaagada islaamiyiinta ah ee ku soo socota.
Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Mali Bah Ndaw ayaa ka hadlay dhimashadiisii​​, wuxuuna ku tilmaamay mid khasaaro weyn u leh dagaalka gobolka Saaxil.
Madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum wuxuu qirey in Mr Déby uu si qoto dheer shaqsiyan ula macaamilay argagixisada – halka hogaamiyaha Nigeria Muhammadu Buhari uu sheegay inuu door firfircoon ka ciyaari lahaa la dagaalanka kooxda islaamiyiinta ee Boko Haram.
Paul Biya oo reer Cameroon ah ayaa geerida ku tilmaamay “khasaare aad u weyn oo soo gaaray Chad, bartamaha Afrika iyo qaaradda” oo uu ugu adeegay si hagar la’aan ah.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu “si murugo leh u helay warka naxdinta leh ee dhimashada”.
Wuxuu yiri: “Waxaan si adag u cambaareyneynaa rabshadaha galaaftay nolosha dad aad u fara badan, oo uu ku jiro tii Madaxweyne Déby”.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi. kaasoo sidoo kale ah madaxweynaha Midowga Afrika, wuxuu yiri “waxay khasaaro weyn u tahay Chad iyo Afrika oo dhan”.
General Mahamat Kaka, oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii muddada dheer maamulayay Chad Idriss Déby, ayaa loo magacaabay hoggaamiyaha waddanka, wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka.
Déby oo 68 jir ahaa ayaa ciidanka booqanayay xilli ay xoogagga fallaagada ku ah dowladdiisa ku howlan yihiin olole ay ku qabsanayaan dhul hor leh.
Dagaalka madaxweynaha lagu dilay waxaa fuliyay fallaagada ku sugan xadka u dhaxeeya Chad iyo Liibiya, halkaas oo ah goobta uu tagay Déby.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in Déby mar qura la kulmay dagaal xooggan.
Previous articleIiraan oo walaac ka muujisay Shirkii Nukliyeerka ee Vienna
Next articleDhammaan kooxihii Ingiriiska oo ka baxay European Super League-ga